Dzorera Kumashure Racking
MAHEERERI anodzosera kumashure zvine hukasha
Iyo inoumbwa neyakajairika mamisirwo ezviwanikwa senge pallet marori. Iwo matori emapallet ane hunhu. Izvo zvinhu zvinotsanangurwa kune imwe mugumo wesherufu uye zvinoteedzera yepamusoro hurongwa. Iyo forklift hapana chikonzero chekupinda munzira.
◆ chengetedza nguva yekunhonga.
◆ Haidi yakawanda mukana, shandisa zvakanaka nzvimbo.
◆ Izvo zvakanaka kune inotonhora imba yekuchengetera.
◆ Iyo inokodzera chikamu chidiki, hombe huwandu.
HEGERLS rinorema basa push back rack 2021 yepamusoro mhando 1500kgs pa pallets ane 5 pallets zvakadzika
1.Product sumo yekusundira kumashure rack
Akarurama Tsigira danda Ngoro njanji Akadzivirirwa mudziviriri Side chipingamupinyi
* 50 kwakakurudzira H300 / H500 D76 * 2.5
3.1 Tsigira danda tsananguro
4.Production ruzivo rwekusunda kumashure rack
4.1chengetedza nguva yekutora.
4.2Hazvidi nzvimbo yakawanda kudaro, shandisa zvakanaka nzvimbo.
4.3Iyakanaka kune inotonhora imba yekuchengetera.
4.4Inokodzera chikamu chidiki, hombe huwandu.
Pashure: HEGERLS nhare mbozha
Zvadaro: HEGERLS masherufu emapallet racking
Giravhiti Inoyerera Rack
Push Dzokera Kuyerera Rack